Kubatanidza Nhare muIkunze Kwekushambadzira Sarudzo | Martech Zone
Chitatu, July 15, 2009 Svondo, June 21, 2015 Adam Mudiki
Mobile Marketing iri kubuda uye ichiwedzera kuwanda mazuva ese. Vhiki rapfuura ndanga ndichishanyira mhuri munzvimbo yeMyrtle Beach ndikaona iri bhodhi rebhodhi. Zvaive zvakanaka kuona kukwezva kukuru kuchisanganisa nhare mune yavo yekutengesa nzira.
Doug ane yakafanana mafoni kubatanidzwa pane yake saiti, iwe unogona mameseji MartechLOG kuenda ku71813 uye tora yambiro paanotumira! Ini ndakacheka iyo shortcode kunze kwemufananidzo uyu saka hapana munhu angaedzwe kuti atumire mameseji (zvinotora mushambadzi mari).
Ichi chaicho hachisiri chega chebhodhi chandakaona nekubatanidzwa kwekushambadzira nhare. Ndakaona chitoro chemoto chinokumbira iwe chinyorwa "BANG" kune shortcode kune yakakosha kupihwa, futi!
Nokubatanidza mameseji nemabhodhi, Ripley's Aquarium:
Ikozvino yave kugona kuteedzera kushanda kwemabhiribhodhi.
Unogona kuona kuti yakawanda sei inokwezva irikugadzira.
Yakaunza imwe nhanho yekudyidzana nemutengi.
Chimwe chinhu chinotonhorera chinogona kuverengerwa mune izvi kugona kunyevera mushambadzi uye kuvapa nenhamba mbozha yemutengi. Fungidzira mameseji eiyo Ripley's Aquarium kupihwa uye maminetsi mashoma gare gare mumiririri anokufonera uye achibvunza kana iwe uine chero mibvunzo!
Uyu muenzaniso wakanaka kwazvo wekuti nharembozha yekubatanidza inogona sei kusimudzira marongero aripo ekunze ekushambadzira. Uri kuitei nharembozha?
Tags: bhodhi kushambadziramobile marketingkushambadzira kwekunzeSMSmameseji
Jul 16, 2009 pa 2: 11 AM
Uyu muenzaniso mukuru unoshanda wekuti chinyakare nhepfenyuro inogona sei kutora tekinoroji nyowani uye irambe ichikosha. Zvinoita kuti ndinetseke kuti ndeapi mamwe echinyakare mashambadziro enhau anogona kuwana hupenyu hutsva nekushandisa nharembozha uye mamwe matsva midhiya matekinoroji
Jun 14, 2012 pa 5: 32 PM
Chakanakisa chinyorwa, chakanyatso nzwisisika uye chinonakidza! ndizvozvo
inobatsira kwandiri, uye yako weblog yakanaka kwazvo. Ndiri kuzogovana
iyi URL neshamwari dzangu. Ingo bookmark ino saiti .kunze kushambadzira